JS ဓာတု Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Weifang အား JS ဓာတု Co. , Ltd Weifang CITY, တရုတ်အခြေစိုက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းကုန်သွယ်နှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရိုးသား၏နိယာမနှင့် win-win ကုန်သွယ်ရေး, အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ကျနော်တို့အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာရေရှည်နှင့်များစွာသောကျော်ကြားဓာတုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူတည်ငြိမ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်, ငါတို့ clients များမှကြီးစွာသောအထောက်အပံ့နှင့်ယုံကြည်မှုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုံးလုံးပိုင်စက်ရုံ Weifang အား၏ Binhai စီးပွားရေးဇုန်-နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဧရိယာ (အမျိုးသားရေးစီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတဇုန်) တွင်တည်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာစက်ရုံတရုတ်အတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပေးသောလွတ်လပ်သောဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး, နှင့်အတူ 3000 တန်ချိန် / ယခုနှစ် 2-ethylanthraquinone စက်ရုံရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်ထိုသို့သော 60 2500 တန်ချိန် / နှစ် 20 polyaluminium ကလိုရိုက်စက်ရုံ, 000 တန်ချိန် / နှစ် 100 မဂ္ဂနီဆီယမ် sulfate စက်ရုံ, 000 တန်ချိန် / နှစ်ပိုတက်စီယမ် sulfate စက်ရုံ၏ anhydrous လူမီနီယံ trichloride စက်ရုံအဖြစ်ထောက်ပံ့စက်ရုံများနှင့်အတူပြည့်စုံဖြစ်ပါသည် 000 တန်ချိန် / တနှစ်နှင့် 60, 000 တန်ချိန် / ယခုနှစ်ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်စက်ရုံ။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D နှင့်ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်အားပိုင်ဆိုင်သည်။
JS ထရေးဒင်းအမြဲ "ဝန်ထမ်းများသည်မင်္ဂလာ, Clients တွေအနေနဲ့အောင်မြင်စို့စို့အသင်းအားထောက်ကူ" ၏စစ်ဆင်ရေးအတွေးအခေါ်လိုက်နာနှင့်တည်ငြိမ်နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကအတိုင်ပင်ခံအားဖွငျ့အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ clients များထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ် ။
Weifang အား Menjie ဓာတု Co. , Ltd မှ 1993 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 40 ကျော်, 000 စတုရန်းမီတာတစ်မြေဧရိယာယူထားသောခဲ့သည်။ ဒါဟာသန့်စင်ပြီးဓာတုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ထက်ပိုမိုဆယ်နှစ်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအလှပသာယာဝပြောတဲ့ရှန်ဒေါင်းကျွန်းဆွယ်အလယ်၌တည်ရှိသည်။ စွန်၏ Weifang အားစီးတီး-ကမ္ဘာ့စီးတီး။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အဓိကအား anthroquinone ဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်နှင့်စသည်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းများများ၏ပေါင်းစပ်, Light-အထိခိုက်မခံပစ္စည်းများ, ဆိုးဆေးများ, များအတွက်ကုမ္ပဏီအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုနဲ့အထူးပြု 2-ethyl anthraquinone ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီး 2000 တန်ချိန်ကြမ်းထုတ်ကုန်များနှင့် 1500 တန်ချိန်ဒဏ်ငွေထုတ်ကုန်တစ်ခုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိခြင်းရောင်းချစကေး။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီလည်းထိုကဲ့သို့သော polyaluminum ကလိုရိုက်, လူမီနီယမ်ကဲ့သို့သောအခြားဓာတုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ် စသည်တို့ကို trichloride anhydrous,
လောလောဆယ်ကုမ္ပဏီကောလိပ်ဒီဂရီ7အချိန်ပြည့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပညာရှင်များထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဒီပလိုမာနှင့်အတူ 28 အထူးပြုပညာရှင်များအပါအဝင် 120 န်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတရုတ်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးခေတ်မီစမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း apparatuses တပ်ဆင်ထားသည်နှင့် feedstock-ထုတ်လုပ်မှုပေါင်းစည်းမှုနှင့်အသစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါဝင်နေသည်။ ကောင်းသောအောင်မြင်မှုကြပြီ။
2. Anhydrous လူမီနီယံ trichloride
3. Polyaluminium ကလိုရိုက်
4. မဂ္ဂနီစီယမ် sulfate
6. Hydrophilic silica fumed
ကျနော်တို့ကြီးမားသောနိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အသေးစားတစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီများသည်အထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်ဖို့အားလုံးကိုကမ္ဘာလုံးကျော် polyurethane ထုတ်ကုန်ရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။
30% Polyaluminium Chloride , ရေကုသမှု polymer , Molecular ဆန်ခါကာလဖြစ်ပါသည် , Pac For Water Treatment, Hypophosphorous အက်ဆစ် , ဆိုဒီယမ် Stannate ,